Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho oo booqasho ku tegay Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho oo booqasho ku tegay Hargeysa
Hargeysa – Mareeg.com: Danjiraha dowladda Imaaraadka Carabta u fahdiya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, Mohamed Al-othmani oo shalay gaaray magaalada Hargeysa ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Axmed Siilaanyo ayaa kulanka kadib xalay qasriga madaxtooyadda casho-sharaf ugu sameeyay weftiga uu Hoggaaminayay Safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Muqdisho Maxamed Al-Othmani.
Madaxweynaha Somaliland xaflada casho-sharafta ah ee uu u sameeyay danjirahaas waxa goob joog ka ahaa Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland, C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Wasiirka Arrimaha Gudaha, Cali Maxamed Waran-cadde, Wasiirka Waxbarashadda, Samsam Cabdi Aadan, Wasiirka Macdanta iyo biyaha, Xuseen Cabdi Ducaalle iyo Wasiir Ku xigeenka Arrimaha dibadda, Mawliid Maxamuud Ibraahim.
Danjiraha Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Al-Othmani oo ka hadlay kulankaasi ayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uga mahad celiyay sida diiran ee ay weftigiisa ugu soo dhaweeyeen Hargeysa, waxaanu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay socdaalkiisa xilligan ee Somaliland oo uu tilmaamay inuu qeyb ka yahay sii adkaynta xiriirka labada dhinac.
Dajiraha Imaaraadka Carabta, Maxamed Al-Othmani waxa uu madaxweynaha maamulka Somaliland ku wareejiyay dukumantiga 6 baabuur oo dawladdiisu ugu deeqday Somaliland, kuwaasi oo iskugu jira baabuurta xumuulka iyo hal cagaf oo shaywal ah isla markaana todobaadka soo socda la filayo in laga dejiyo marsadda Berbera.
Madaxweynaha Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo kulankaasi ka hadlay ayaa uga mahad-celiyay dawladda Imaaraadka kaalinta ay kaga jirto horumarinta Somaliland.
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu uga mahad celiyay safiirka socdaalkiisa xilligan ee Somaliland waxaanu uga xog-waramay xaaladda guud ee Somaliland.
Dalka Imaaraadka Carabta ayaa mashaariic farabadan ka wada koonfurta Soomaaliya, waxaana haatan muuqata iney taageeradooda u gudbiyeen gobollada woqooyiga Soomaaliya oo sheeganaya iney ka go’een Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Gaas: Waan in meel looga soo wada jeesto Kuwii weeraray Xamar iyo Jabuuti
Miino hore oo carruur kula qaraxday Galgaduud